Tongasoa eto amin'ny
Akademia Med Aid.
Nandritra ny tantaram-piainany lava, ny Medical Aid International dia nanana ny finoany fanabeazana. Na amin'ny fomba tsy ara-potoana izany amin'ny tontolo lavitra, fampianarana momba ny fampianarana momba ny traumatiora voalohany na famolavolana sy fampandehanana ny fandaharanay momba ny haitao biomedika.
Ampahany amin'ny Family International Medical Aid
Mahazo mari-pahaizana azo antoka
Ao anatin'ny fivoarantsika an'io faritra io sy ny fanombohana ny fandaharan-draharahan'ny injeniera biomedika an-tserasera dia tsapanay fa izao no fotoana hanombohana ara-dalàna ny fianarantsika rehefa miasa izahay hanampy ireo izay tsy dia mahantra noho ny tenanay. Manana programa bebe kokoa eo an-dalam-pandrosoana izahay ary tsy afaka miandry ny hizara izany aminao rehetra.
Fanabeazana momba ny ratra orthopedic
Hijery ny Mazava ho azy
Fianarana teoria biolojika momba ny haitao